၁နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှာ ဇနီးရဲ့ပုံကိုတက်တူးထိုးခဲ့ပေမဲ့ တကယ့်ပုံနဲ့မတူဘဲ…..see more….a – Alanzayar
၁နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှာ ဇနီးရဲ့ပုံကိုတက်တူးထိုးခဲ့ပေမဲ့ တကယ့်ပုံနဲ့မတူဘဲ…..see more….a
၁နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှာ ဇနီးရဲ့ပုံကိုတက်တူးထိုးခဲ့ပေမဲ့ တကယ့်ပုံနဲ့မတူဘဲ…..see more.
လူငယ်တစ်ဦးက၁နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အခမ်အနားမှာ ဇနီးဖြစ်သူကို အံ့အားသင့်စေချင်သော်လ ည်း နောက်ဆုံးမှာ အားလုံးက ထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘဲ အိမ်ပေါ်ကနေ ဆင်းခဲ့ရပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် တစ်နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှာ သူ့ရဲ့ဇနီးသည်ကို အံ့အားသင့်စေရန် ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့လှပတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို တက်တူးထိုးဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ် ။ မူလက အလွန်ချိုမြိန်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြ စ်ခဲ့ပေမဲ့ အဆုံးသတ်မှာ ထိုလူငယ်အတွက် ခါးသီးလွန်းလှပါတယ် ။
ဒီလို ချိုမြိန်တဲ့ အပြုအမူကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူက ချီးကျူးခံရမယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် အင်္ကျီကို ချွတ်ပြပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကိုဇနီးကအိမ်အပြင်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် ။ ဒီတက်တူးကို သူ့မိန်းမကိုပြရဲတာကတော်တော်ရဲရင့်တဲ့လူငယ်လေးဖြစ်ရမယ်လို့ လူတော်တော်များများက ယုံကြည်ကြပါတယ် ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်က တက်တူးဟာ ရုပ်ဆိုးလွန်းပြီး တကယ့်ပုံနဲ့ မတူတာကြောင့်ပါအင်တာနက်သုံးစွဲသူတော်တော်များများက ဒီလူငယ်လေးဟာ သူ့ဇနီးက အလွန်နူးညံ့တာကြောင့် ကံကောင်းတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
၁နှဈမွောကျမင်ျဂလာနှဈပတျလညျမှာ ဇနီးရဲ့ပုံကိုတကျတူးထိုးခဲ့ပမေဲ့ တကယျ့ပုံနဲ့မတူဘဲ…..see more.
လူငယျတဈဦးက၁နှဈမွောကျမင်ျဂလာနှဈပတျလညျအခမျအနားမှာ ဇနီးဖွဈသူကို အံ့အားသငျ့စခေငျြသျောလ ညျး နောကျဆုံးမှာ အားလုံးက ထငျတဲ့အတိုငျးမဖွဈဘဲ အိမျပျေါကနေ ဆငျးခဲ့ရပါတယျ ။
အထူးသဖွငျ့ တဈနှဈပွညျ့ မင်ျဂလာနှဈပတျလညျမှာ သူ့ရဲ့ဇနီးသညျကို အံ့အားသငျ့စရေနျ ရငျဘတျပျေါမှာ ဇနီးဖွဈသူရဲ့လှပတဲ့ ဓာတျပုံတဈပုံကို တကျတူးထိုးဖို့ ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ ။ မူလက အလှနျခြိုမွိနျပွီး ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ ဇာတျလမျးဖွ ဈခဲ့ပမေဲ့ အဆုံးသတျမှာ ထိုလူငယျအတှကျ ခါးသီးလှနျးလှပါတယျ ။
ဒီလို ခြိုမွိနျတဲ့ အပွုအမူကွောငျ့ ဇနီးဖွဈသူက ခြီးကြူးခံရမယျလို့ ထငျခဲ့ပမေယျ့ အကငြ်္ီကို ခြှတျပွပွီးတာနဲ့ ဒီကောငျလေးကိုဇနီးကအိမျအပွငျထုတျပဈလိုကျပါတယျ ။ ဒီတကျတူးကို သူ့မိနျးမကိုပွရဲတာကတျောတျောရဲရငျ့တဲ့လူငယျလေးဖွဈရမယျလို့ လူတျောတျောမြားမြားက ယုံကွညျကွပါတယျ ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူ့ရငျဘတျပျေါက တကျတူးဟာ ရုပျဆိုးလှနျးပွီး တကယျ့ပုံနဲ့ မတူတာကွောငျ့ပါအငျတာနကျသုံးစှဲသူတျောတျောမြားမြားက ဒီလူငယျလေးဟာ သူ့ဇနီးက အလှနျနူးညံ့တာကွောငျ့ ကံကောငျးတယျလို့ မှတျခကျြပေးခဲ့ကွပါတယျ ။
Previous Article ဦးဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့အဖြစ်
Next Article ဟိုတယ်အခန်းနံပါတ် (၃၉) (မိန်းကလေးများမဖတ်ရ)